पुल बनेपछिको आनन्दै आनन्द
मोरङ जिल्लाको आफ्नो गाउँलाई सहरी क्षेत्रसँग जोड्ने गरी घुरघुरिया खोलामा झोलुङ्गे पुल बनेपश्चात् खुसी भएकी एक ग्रामीण महिलाले पुल नहुँदाको दुःख सम्झेर भन्छिन्, “पुल नहुँदा, केटाकेटी विद्यालय र आफू बजार तथा स्वास्थ्य उपचारसमेतका काममा जाँदा निकै हन्डर खानुपरेको थियो, पुल बनेपछि आनन्दै आनन्द भयो । ” यो नेपालका दुर्गम तथा ग्रमीण भेगमा रहेका जनताको आफ्नो ठाउँ देशका अन्य भागमा सहजै जोडियोस् भन्ने चाहना राख्नेहरूको प्रतिनिधि आवाज हो । पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा त झोलुङ्गे पुलको निर्माणले पनि सम्बन्धित क्षेत्रका परिवारको अति निम्छरो आर्थिक सामाजिकस्तरलाई माथि उकास्न ठूलो भूमिका खेलेका थुप्रै उदाहरण पाइन्छ । यी अभिव्यक्तिले मानिसको जीवनमा सुगम बाटोघाटोले कस्तो महŒव राख्छ भन्ने कुराको मार्मिक र यथार्थ चित्रण गर्छन् ।
यद्यपि यो त झोलुङ्गे पुल मात्र हो, यसले आधारभूत र न्यूनतम पहँुच मात्र बढाउँछ । यसले यातायातका साधनको निर्वाध आवागमनको पूर्ण सुविधा उपलब्ध गराउँदैन । मानिसको आवतजावत र वस्तुको प्रवाहलाई तीव्र बनाई त्यस क्षेत्रको सर्वाङ्गीण समुन्नतिको लागि एक्काइसौँ शताब्दी अनुकूलको क्षमताको पुलसमेतको यातायात संरचना चाहिन्छ । मानिसको भौगोलिक पहुँच बढाउने प्रमुख माध्यम यातायात नै हो, त्यसमा पनि नेपालजस्तो देशको लागि सडकको ठूलो महŒव हुन्छ । पुल सडकको अभिन्न अङ्ग हो । सडकको आवश्यकताको पहिचान, त्यसको विकास र डिजाइन गर्दा नै पुलसमेत त्यसै अनुरूप डिजाइन गरिनुपर्छ । ठीक स्थान, स्वरूप, आकार र भारवहन क्षमतामा निर्मित पुलले समय, दूरी र लागत सबै घटाउँछ । क्षेत्र उपक्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउँछ । नेपालमा त सडक परियोजनाको परिकल्पना गरिन्छ, डिजाइन गरिन्छ, बजेट राखिन्छ तर त्यहांँ पुलपुलेसा अनि पार्किङ एवं सेवा केन्द्रसमेतका अनिवार्य र अभिन्न संरचनाको परिकल्पना गर्न छुटाइएको हुन्छ । यस्ता उदाहरण बग्रेल्ती पाइन्छन् । त्यसको एउटा उदाहरण हो, कोटेश्वर–तीनकुने–माइतिघर सडक विस्तार योजना । यसमा योजना अघि सारियो, बजेट विनियोजन भयो, सडक पनि विस्तार गरियो तर पुलहरू सडकभन्दा थोरै लेनका वा साँघुरा हुनाले सडक विस्तारको उद्देश्य अझै पूरा भएको छैन । बागमती र धोबीखोलाको पुललाई पनि सडक अनुरूपकै लेनमा विस्तार गर्ने गरी पुल निर्माणको काम भर्खर हुँदैछ । यो कुरा पहिले नै हुन सकेको भए सडक जाम हुँंदैनथ्यो । यो भयोे संरचना निर्माण गर्दा त्यसका अन्तरसम्बन्धित अभिन्न पक्षलाई पनि सँगै लैजान सकेमात्र अपेक्षित लाभ प्राप्त हुने कुरा ।
कुनै पनि क्षेत्रमा सडक–पुल बनेपछि स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग व्यवसाय र सुरक्षा समेतका कुरामा जनपहुँच बढ्छ । निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रको समेत लगानीको लागि वातावरण बन्छ । सरकारले एक रुपियाँ लगाउँदा निजी र सामुदायिक क्षेत्रले पाँच लगाउंँछन्, अस्पताल खुल्छ, विद्यालय चल्छ, कृषि उत्पादन सहज रूपमा बजारमा पुग्छ । कृषि सामग्री खेतबारीमा पु¥याउन सकिन्छ । परिवेश तथा सम्भाव्यता हेरेर होटल खुल्छन्, उद्योग स्थापना हुन्छन् अनि व्यापार बढ्छ, रोजगारी बढ्छ । यी सबै कुराले सम्बन्धित परिवारको आय र सरकारको राजस्व दुवै बढ्छन्, युवा त्यहीँ अडिन्छन् । यसरी पुलसहितका आधुनिक सडकहरू नै नेपालका रक्तवाहिनी हुन सक्छन्् ।
कतिपय पुलहरूको निर्माणले त्यस क्षेत्रको जनजीवनमा पारेको सकारात्मक प्रभाव पारेका छन् । बर्दियाको कोठियाघाटमा कर्णाली नदीमाथि १ दशमलव १५ कि.मि. लामो पुल बन्नाले त्यहाँका दुई लाखभन्दा बढी जनताको आर्थिक क्रियाकलापमा विस्तार, सामाजिक सेवा (शिक्षा तथा स्वास्थ्यसमेत) मा पहुँच एवं प्रशासनिक सुगमतामा बढोत्तरी गराएको छ । यसले छुट्टै टापुजस्तो रहन गएको दशभन्दा बढी गाविसको क्षेत्रलाई पूर्व पश्चिम राजमार्ग तथा सदरमुकामसँग जोडेको छ । अब दुई÷चार वर्षमा यस क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक संरचनामा निकै परिवर्तन हुनेछ । यसको थप पुष्ट्याइँ चितवनको नारायणघाट तथा नवलपरासीको गैँडाकोटलाई जोड्ने गरी नारायणी नदीमा पुल बनेपछिको अवस्थाले गर्छ । पुल बन्नुभन्दा अगाडि त्यहाँ पनि नदी पार गर्न कोठियाघाटमा झैँ डुङ्गा, फेरि र पुन्टुमको प्रयोग हुन्थ्यो । गैँडाकोटको खासै विकास भएको थिएन । २०३७ सालमा ४२० मिटरको पुल निर्माण कार्य पूरा हुँदा बेलुकीपख पुलतर्फ जाँदा निकै सुनसान हुन्थ्यो । संगमचोकभन्दा पश्चिमतर्फ खासै बाक्लो बस्ती थिएन । अहिले नवलपरासीको कावासोती र गैँडाकोट तथा चितवनको नारायणघाट, भरतपुर र रत्ननगरसमेतले एउटै सहरको रूप लिएका छन् ।
चाहे कञ्चनपुर जिल्लाको चाँदनी दोधारा जोडने महाकाली नदीमा बनेको १.५ किमिको झोलुङ्गे पुल होस् वा सप्तकोशी नदीमा बनेको सिन्धुलीको खुर्कोटबाट रामेछापको मन्थली जानेबाटोलाई जोड्ने अथवा सुनसरी र उदयपुर जोड्ने चतरामा बनेको पुल, सबैले मानिसलाई निकै सहज बनाएका छन्, बजारमा पहुँच पु¥याउन मद्दत गरेका छन् । गङ्गानदीमा पुलसमेतको सडक पहुँच नहुँदा नेपालको वीरगन्जलगायत भारतको रक्सौलबाट पटना पुग्न एकदिन पूरा लाग्थ्यो, अहिले ५÷६ घन्टामै पुगिन्छ ।
उत्तरी छिमेकी चीन सडक, पुल, रेलवे, बाँध, विद्युत् आयोजना, कार्यलयीय तथा व्यापारिक संरचना निर्माण प्रविधि (आर्किटेक्ट) मा विश्वमै अग्रणी देखिएको छ । उदाहरण्को लागि दक्षिणपश्चिम चीनको विपान नदीमाथि बनेको नदीको सतहभन्दा ५६४ मिटर माथि रहेको एक हजार ३४१ मिटर लामो चारलेनको पुल विश्वकै उदाहरण हो । यस पुलले गुइजाउ र युन्नान प्रान्त जोड्ने यात्राको समयलाई पाँच घण्टाबाट दुई घन्टामा झारेको छ । त्यस्तैगरी झ्यागंजियाजी नेशनल फरेष्ट पार्कको नदीमाथि बनाइएको ४३० मिटर लामो शिशाको पुल पर्यटकीय दृष्टिले अन्त्यन्त चर्चित छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा समेत चीनले कतिपय संरचना निर्माणको जिम्मा पाएको सन्दर्भमा यस्ता क्षेत्रका प्रविधि एवं मोडेललाई नेपालमा ल्याउने र दक्षता नेपाली संस्थागत क्षेत्रमा हस्तान्तरण गर्न गराउनको लागि चीनको सहयोग लिन सकिन्छ ।
प्रस्तुत पृष्ठभूमिमा विकासको गतिलाई तीव्र पार्नमा मूलतः मानव संशाधन, यातायात, ऊर्जा र सञ्चारसमेतका चार कुरामा ध्यान दिनुपर्ने रहेछ । मानिस जति योग्य र क्षमतावान हुन्छ, उसको दिमाग चाँडो कुद्छ, त्यसको असर प्रविधि तथा संरचनाको विकासमा पर्छ । गुणस्तरीय संरचनाको उपलब्धता जति बढी हुन्छ, त्यसले पैसा र सीपको प्रयोगको गतिमा तीव्रता ल्याउँछ, त्यसको सकारात्मक प्रभाव व्यवसाय, लगानी अनि उत्पादनमा पर्छ । उसले कृषि, उद्योग र व्यापारको अन्तरसम्बन्ध स्थापित गरेर अघि बढ्न सक्छ । यसो हुँदा आय बढ्छ । आय बढेपछि मानिसले आफूलाई चाहिने सेवा सुविधाको विस्तार आफैँ गर्छ । जहाँ यातायात, ऊर्जा र सञ्चारका पर्याप्त सुविधा हुन्छन्, त्यहाँ आमजनता र सरकारको पाइला सँगसँगै अगाडि बढ्छ । ‘सरकार अगाडि अगाडि’ को अर्थ हो नीतिगत तथा संरचानगत सहजीकरण एवं वैधानिक अनुगमन तर नेपालमा सरकार अगुवा बन्न पनि सकेन, युवा र उत्साही व्यवासायीले अगाडि लाग्न खोज्दा न्यूनतम वातावरण पनि बनाइदिन सकेन, कृषक अगाडि लाग्न खोज्दा बजार स्थिर र अनुकूल भएन । संरचना र अन्तरसम्बन्धित सञ्जालको अवस्था अत्यन्त कमजोर रह्यो ।
तसर्थ बुझ्नुपर्ने कुरा के भने घर सानो छ, कम क्षमताको छ, तलाहरूको भार क्षमता कम छ तर त्यसमा बस्ने मानिस धेरै भए, भीडभाड भए के हुन्छ ? दुर्घटना हुन्छ । त्यस्तै सानो र डिलहरू कमजोर भएको पोखरीमा पानी धेरै राखियो भने त्यो फुट्छ र धनजनको नोक्सान हुन्छ । उसैगरी लुलो घेरा भएको सानो भकारीमा धेरै अन्न राख्दा अन्न पोखिन्छ, नासिन्छ । अर्थतन्त्रमा पनि यी कुरा त्यही तवरमा लागू हुन्छ ।
बलियो एवं विस्तारित भौतिक संरचना र पूर्वाधार तथा दक्ष मानव स्रोत अर्थतन्त्रका जग हुन्, यी असल घेराबेरा हुन् । यी कुरालाई यथावत् राखेर अन्य क्षेत्रमा मात्र लगानी बढाउन खोजेमा लक्षित उद्देश्य हासिल हुँदैन, बरु दुर्घटना निम्तिन सक्छ । उदाहरणको लािग चीनले तीन दशकसम्म लगातार दश प्रतिशतको वृद्धि हासिल ग¥यो । भनिन्छ, सुरुका दिनमा १३ प्रतिशतसम्मको वृद्धि भयो तर त्यसलाई तल झारियो । त्यसको प्रमुख कारण थियो वृद्धि र भौतिक पूर्वाधारबीच तालमेल कायम गर्नु । अहिले चीनले तेह्रौँ पञ्चवर्षीय योजना (२०१६–२०२०) मा ६ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिलाई निरन्तरता दिने लक्ष्य राखेको छ । ऐतिहासिक सिल्क रोडलाई फरक नाम दिएर संयुक्त राज्य अमेरिका समेतलाई झस्याङ पार्ने गरी अघि सारिएको ‘एक क्षेत्र–एक सडक’ योजना यसै विषयको आधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय संस्करण हो । भारतले पनि पछिल्ला वर्षमा यसै सोचअनुसार अघि बढेर वृद्धि हासिल गरेको हो ।
त्यसैले यदि अर्थतन्त्रलाई उच्च, फराकिलो र दिगो वृद्धितर्फ डो¥याइ लक्ष्यअनुरूप मध्यम आयस्तरमा पु¥याउने हो भने नेपालले पनि यातायात, ऊर्जा, सिँचाइ तथा नदी समायोजन समेतका क्षेत्रमा उच्च र गुणस्तरीय लगानी गर्नु आवश्यक छ । अनि यातायात, ऊर्जा, कृषि र उद्योग क्षेत्रका पुराना संरचना तथा प्रविधिलाई नयाँ एवं आधुनिक संरचना र प्रविधिबाट विस्थापित गराउन पर्छ । यसो भएमा मात्र पूरै देशका जनताले आनन्दै आनन्दको महसुस गर्नेछन् ।
अख्तियार प्रमुखका �